API 6D Three Piece Forged Trunnion Mounted flanged Ball Valve, China API 6D Three Piece Forged Trunnion Mounted flanged Ball Valve Manufacturer, Suppliers, Factory - Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve no marika)
Valim-borona mitaingina Trunnion dia misy fantsom-panafody mekanika fanampiny ambony sy ambany izay mampihena be ny tselika ary mety tsara amin'ny valizy baolina lehibe sy avo lenta.
Miaraka amin'ny famoahana aotra sy fanidiana tsara, ny valizy mitaingina trunnion dia be mpampiasa amin'ny fantsona sy fotodrafitrasa hafa.
Ny valizy rehetra dia voasedra sy voarakitra amin'ny takiana fitiliana API 6D ary novolavolaina mba hanarahana ny fenitra NACE MR0175 miaraka amin'ny traceur MTR feno.
● habe: 2 "-24"
Rehefa avo kokoa noho ny herin'ny lohataona seza miampy tsindry ny tsindry ny lavaka, ny hetsika manala tena dia mamela ny seza valizy hifindra somary lavitra ny velaran'ny baolina. Noho izany, ny famonoana tafahoatra ao anaty lava-vatan'ny vatana dia alefa ao anaty fantsom-panafody mba hamerenana ny fifandanjana eo anelanelan'ny lava-batana sy ny fantsona (na ny ilany ambony na ny ilany).
4 lohany ASTM A105
5 Body Gasket 316 + Graphite
7 Gasket ambany manjarano
8 ambany ASTM A105
10 visy ASTM A193 B7M
13 Drain Plug ASTM A276 316
14 mitondra 316 + PTFE
16 Tsindrona menaka ASTM A276 316
17 Vent Plug ASTM A276 316
18 Fitaovana manohitra ny statika ASTM A276 316
19 mitondra 316 + PTFE
20 Tanana tanana ASTM A276 410
21 SAMPA AISI 4140 + 3 mil ENP
23 Gasket manjarano
26 fonosana manjarano
27 Kitapo fonosana ASTM A276 410
28 Fitaovana DI
30 Glans AISI 1045
31 visy ASTM A193 B7M
32 visy ASTM A193 B7M
35 -bazana ASTM A194 2HM
36 fanandratako CS + ZN
37 Seza ampidiro RPTFE / Devlon® / PEEK
38 Mpitazona seza ASTM A105 + 3 mil ENP
40 Mpitazona lohataona ASTM A105 + 3 mil ENP
41 Gasket manjarano
42 Spring Inconel® X-750